Citizenity of Antigua uye Barbuda - Investment mumwe
Ingowedzerwa kungoro yako
Ona motokari ()
Nezve Antigua & Barbuda
Antigua uye Barbuda Passport
Dziviriro yedata & Yakavanzika
Citizenity of Antigua uye Barbuda - Bhizinesi Investment mumwe
Kuwedzera chigadzirwa mungoro yako
Sangano reC Citizenship by Investment Unit (CIU) rinopa kurudziro kuCabinet yekubvumidza mabhizinesi, angave aripo kana anofungidzirwa, nechinangwa chekuti tiise mari mubhizinesi pasi peC Citizenship ne Investment Program.
Iyo miviri yebhizinesi yekudyara sarudzo ndeiyi:
Mushandi mukuru, pachake, anoita investa mubhizinesi rinotenderwa angangoita US $ 1,500,000
Vashoma vevanhu vaviri kuti vaite mari yekudyara mubhizinesi rakabvumirwa rinosvika zviuru zvishanu zvemadhora zviuru zvishanu. Munhu mumwe nemumwe anodikanwa kuti ape mari inosvika zviuru mazana mana zvemadhora emadhizaini pakubatanidza mari. Chikumbiro cheC Citizenship ne Investment chinogona kuendeswa pachinzvimbo chake, panzvimbo pavo kana mumiririri.
Kamwe kubvumidzwa kwekudyara kwebhizinesi kuchinge kwapihwa, iyo CIU ichatarisa mafomu ekushandisa kuva vagari vemo. Maitiro ekunyorera akafanana neayo yeNFF, kureva, kana uchiendesa chikumbiro chako uchakumbirwa kubhadhara mubhadharo wakakodzera kubhadharwa uye 10% yemari inobhadharwa nehurumende. Kana wagamuchira tsamba yekubvumidza iwe uchakumbirwa kubhadhara iyo huwandu hwemari yekugadziriswa kwehurumende uye rako bhizinesi rekudyara huwandu mukati memazuva makumi matatu. Nekuda kwehunhu hwakasiyana-siyana hwekudyara kwakadaro chero chibvumirano cheescrow chinozotaurirana pakati pemapato achiri kuchinjisa mari yekudyara inofanira kuitwa mukati memazuva makumi matatu kubva pakubviswa kwetsamba yekubvumidza.
Kune mumwe anonyorera, kana mhuri ye4 kana zvishoma
Kugadzirisa muripo: US $ 30,000
Kwemhuri ye5 kana anopfuura: -
US $ 150,000 Contribution
Kugadzirisa Mutero: US $ 30,000 pamwe neUS $ 15,000 kune mumwe nemumwe anotsamira
Kana zvangogashirwa, gwaro rekunyoreswa rinopihwa wega wekutanga kunyorera uye nhengo dzemhuri yavo rinozoendeswa kuhofisi yemapasipoti nechikumbiro chavo uye chero zvinyorwa zvinoteedzana.
Wako wakamiririwa mumiririri / mumiriri achakupa mazano emazuva anowanikwa kune chero:
Shanyira Antigua neBarbuda kuunganidza pasipoti yako uye kutora mhiko kana kusimbiswa kwekuvimbika.
Shanyira Amburenzi, High Commission kana Consular Hofisi yeAntigua neBarbuda kuunganidza pasipoti yako uye kutora mhiko kana kusimbiswa kwekuvimbika. Batanidza kune Embasses / High Commissions / Mahofisi eHofisi anoratidzwa pane imwe peji peji.
Kudzokera kuCitizens Antigua neBarbuda
Wechipiri Kugara uye Pasipoti neInstitute Kunzverwa kwehurumende Mumiriri. • Kugara kweSt. Kitts
Arthur Evelyn Kuvaka Charlestown, Nevis, St. Kitts naNevis
Citizenity of Antigua and Barbuda Kurumidza link:
Passport & Visa Zvinodiwa
CIP 6-mwedzi mushumo - 1st Chikunguru 2019 - 31st Kubvumbi 2019
© 2020, Citizenity of Antigua uye Barbuda Inowanikwa ne Shopify
Shandisa mavhesi ekurudyi / kurudyi kuti uende padhidhiyoji kana shandura kuruboshwe / kurudyi kana uchishandisa foni